🥇 ▷ 'Call of Duty' waxay lahaan doontaa dagaal royale oo bilaash ah si loola tartamo 'Fortnite' iyo 'PUBG' ✅
‘Call of Duty’ waxay lahaan doontaa dagaal royale oo bilaash ah si loola tartamo ‘Fortnite’ iyo ‘PUBG’
Tan iyo markii la soo bandhigay bishii Maajo, Baaqa: Waa Dagaallada Casriga ah Waxay farxad weyn ku abuurtay taageerayaasha caanka ah fanaaniinta caanka ah. Si kastaba ha noqotee, Infinity Ward wali lama cadeyn haddii gaarsiinta cusub ay muujin doonto a dagaalka royale, xaalad dheelitiran oo xukuntay warshadaha ciyaarta fiidiyowga labadii sano ee la soo dhaafay. Warbixin dhowaan soo baxday ayaa taas filaya soo jeedinta tartanka haddii la heli karo, laakiin aan ahayn sida dad badani filayeen.
TheLongSensation, a youtuber oo hore u soo siiday macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan suntan U yeedh waajib, ayaa lagu muujiyay akoonkiisa Twitter waxa Howlgalku wuxuu bilaabi doonaa royale dagaal cusub bilaha ugu horeeya sanadka 2020. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon laheyd ciyaar gebi ahaanba Madaxbannaan taasi qayb kama noqon doonto warshadaha badan ee Dagaal casri ah. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu raaciyay, inuu qaadan doono qaabka ganacsiga bilaash u ciyaaro Si aad ugu istaagto magacyada ugu caansan ee hiddaha: Fortnite, Apex Legends iyo xitaa PUBG. Horumarinta ayaa mas’uul ka noqon doona Infinity Ward iyo Raven Software.
Haddii la xaqiijiyo, waxay noqon doontaa dhaqdhaqaaq aad u caqli badan oo ay wadaan “Activision”, oo ah tifaftire hore u lahaa khibrad taban oo ku saabsan hiddaha sanadka 2018. Waana taas Wicitaanka Waajibaadka: Black Ops 4 waxaa ka mid ahaa dagaal royale –Madoow– waa maxay ma helin guulaha la filayay. Sababaha Fashilka? Dhex-galka qaab-dhismeedka this cinwaan dib loo cusbooneysiyo ma ahayn dalab soo jiidasho leh. Ciyaartoyda ma aysan dooneynin inay qarash ku bixiyaan soo jeedinta aan sii wadan doonin horumarkooda sannadka soo socda.
Kala sooca royale dagaalka iyo keenida ugu weyn waxay u saamaxaysaa iyaga, marka lagu daro joogteynta horumarka ciyaartoydu si joogto ah, maareeyso cusbooneysiinta iyo waxyaabaha siidaynta shaqsi ahaan. Haddii macluumaadku run yahay, waxay runtii ka faa’iideysanayaan mashiinka garaafka cusub ee ay soo saartay Infinity Ward, kaas oo taageeraya in kabadan 100 ciyaartooy ciyaar. Dabcan, aaladda farsamada ayaa lagu sii deyn doonaa Dagaal casri ah.
The dib u bilaw ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed wuxuu ka gudbi doonaa qaabkii caadiga ahaa ee loo yaqaan ‘franchise’, maxaa yeelay waa markii ugu horreysay ee ay soo bandhigi doonaan Dagaalkii dhulka, taas oo u oggolaan doonta ugu yaraan 64 ciyaartoy midba midka kale ka wajiho dagaal ballaaran. Isticmaalayaashu waxay lahaan doonaan gawaadhi waaweyn iyo khariidado. Waxay si cad jawaab u tahay Waxqabadka Goob Dagaal. Dagaal casri ah waxaa laga heli karaa on Oktoobar 25 on PlayStation 4, Xbox One iyo PC.